Kraft bepa bhegi rakavakirwa pamuti pulp bepa, ruvara rwakakamurwa chena kraft bepa uye yero kraft bepa, inogona kushandisa PP zvinhu pabepa rine rukoko rwefirimu, isina mvura mhedzisiro, bhegi simba rinogona kuitwa zvinoenderana nevatengi zvinodiwa kune imwe kusvika akaturikidzana matanhatu, kudhinda uye bhegi kusangana. Op ...
ne admin pane 20-11-06
Chese chiito cheHongbang chizere nekukohwa. Pamusangano wepasi rose muIndonesia, Hongbang akabudazve. Kwaive kubudirira kwakazara uye kwakabvunzurudzwa pane yemuno TV show. In ichi kuratidza, isu kamwe zvakare kuratidza mweya Hongbang - kubatana, zvakanaka, zvakaoma str ...
Yechinomwe Hong Kong Yepasi Pose Kudhinda uye Kuteedzera Exhibition inzvimbo yepamusoro uye isingawanzo imwechete-yekumira bhizinesi chikuva cheiyo indasitiri. Rave rave rakakosha zambuko uye hub inobatanidza kudhinda nekupakata sevhisi vanopa pamwe vepasirese vagadziri, sevhisi mupi ...